Ambondromamy-Ambatoboeny: nandray ny fankalazana ny Andron’ny Tanora Mioitra andiany voalohany | Région Boeny
Notontosaina ny zoma 07 mars 2017 tao Ambondromamy, distrikan’Ambatoboeny, ny fankalazana ny Andron’ny Tanora Mioitra andiany voalohany nokarakarain’ny fandaharan’asa PROSPERER eto Boeny.
Tanjona kendrena amin’izao hetsika ny ahafahan’ny tanora hiditra amin’ny sehatry ny asa mba tsy ho lasa vesatry ny fiaraha-monina hoy ny mpandrindram-paritry ny PROSPERER eto Boeny, Atoa Paulin.
Hatramin’ny taona 2014 niasan’ny PROSPERER taty amin’ny faritra Boeny, dia tanora miisa 500 latsaka kely no efa notohanany tamin’ny alàlan’ireo làlam-piharina 22 vatsiana vola ao amin’ity fandaharan’asa fampandrosoana ity. Tafiditra amin’izany ireo tanoravavy 17 hatramin’ny 25 taona, marefo ara-pivelomana eo anivon’ny fiaraha-monina, ka mangataka te-hioitra amin’ny fiainana.
Vina napetraky ny fandaharan’asa ho an’ny taona 2017 dia tanora miisa 200 hafa indray no tokony hahazo tohana. Distrika efatra, Ambatoboeny, Mahajanga I, Mahajanga II, Marovoay, no toerana sahaniny amin’izany.
“Hararaoty ny fisian’ity fandaharan’asa ity eto amin’ny faritra mba hahitanareo izay ho soritr’asa hivelomana” hoy ny lehiben’ny kabinetran’ny Faritra, Atoa Hemedy tamin’ireo tanora nanatrika ny lanonana.
Nisy ny fitsidihana ireo trano heva nampiratina ny vokatr’ireo karazana seham-piharina nampiofanana ireo tanora manerana ireo disitrika efatra.
Ankoatra izay, notolorana kit de demarrage, na fitaovana enti-miainga ireo tanora sivy mianadahy avy ao Marovoay sy Ambatoboeny izay nandalo fiofanana tao anatiny 09 volana mikasika ny fandrahoan-tsakafo, fanjairana ary fambolena bambou na volobe sy ny fiompiana akohom-borona. Maimaim-poana ny fiofanana saingy tsy azo amidy na hatakalo kosa ireo fitaovana nozaraina satria fananam-panjakana hoy ny mpandrindram-paritra.
Nanotrona ny fankalazana ity andron’ny Tanora Mioitra Tanora Mioitra andiany voalohany tao Ambosndromamy ity, ireo Ben’ny tanàna voafidy tao amin’ny distrikan’Ambatoboeny ary ireo talem-paritra maromaro, miara-miasa amin’ny PROSPERER.